मानिसमा सबै भन्दा धरै हुने पाँच क्यान्सरबारे जानकारी - ज्ञानविज्ञान
क्यान्सर (चिकित्सकीय पद: घातक नियोप्लास्म) रोगहरूको एक वर्ग हो जसमा कोशिकाहरूको एक समूहको अनियन्त्रित वृद्धि (सामान्य सीमा भन्दा अधिक विभाजन), रोग आक्रमण (आस-पासको उतकहरूको विनाश आक्रमण) र कहिलेकाँही मेटास्टेसिस (लसिका या रक्तको माध्यमले शरीरको अन्य भागहरूमा फैलन्छ)को रूपमा देखिन्छ ।
क्यान्सर गम्भिर प्रकारको रोग हो। जुनसुकै क्यान्सर लागेपनि पैसा र शरीर दुवैको क्षति हुन्छ । तर क्यान्सरलाई बेलैमा पहिचान गर्न सकियो भने रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ । क्यान्सरका लक्षण देखिए भने पनि आत्तिइ हाल्नु हुँदैन तर नियमितरुपमा जाँच र चिकित्सकको परामर्स भने लिनु पर्छ ।
मानिसमा बढी हुने पाँच क्यान्सरबारे जानकारी
१. स्तन क्यान्सर
विश्वमा महिलाको ज्यान लिने प्रमुख रोग स्तन क्यान्सर हो । स्तन क्यान्सर महिलामा हुने गम्भीर समस्याका रूपमा देखा परेको छ । सामान्य कुरामा हेलचेक्र्याइँ गर्दा र वेलैमा रोगको निदान एवं उपचार गर्न नसक्दा स्तन क्यान्सरबाट कैयौँ महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । स्तनमा भएका कोष—कोषिकाको अनावश्यक वृद्धिका कारण क्यान्सर हुने गर्छ । स्तनमा देखिने सामान्य गिर्खा, गाँठागुठी, निको नहुने घाउ नै क्यान्सरका रूपमा परिणत हुन सक्छ ।
पहिलो स्टेजमै स्तन क्यान्सरबारे थाहा भएमा निको पार्न सकिन्छ । तर, समय गुज्रिएपछि क्यान्सरबारे थाहा भएमा यसले ज्यान नै लिन सक्छ । बदलिँदो जीवनशैली, अस्वस्थकर रहनसहनका कारण स्तन क्यान्सरको प्रकोप दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । बढी उमेरमा विवाह गर्ने, बच्चा नजन्माउने महिलामा यस्तो रोग लाग्न सक्छ । नियमित व्यायामबाट पनि स्तन क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ । बच्चा भएका आमाले नियमित स्तनपान गराउनुपर्छ । यसले बच्चालाई मात्र नभएर आमाको स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ ।
२. पाठेघरको मुखको क्यान्सर
नेपालका महिलामा सबैभन्दा बढी देखिने अर्को रोग हो, पाठेघरको मुखको क्यान्सर । यो क्यान्सरको पनि सुरुकै अवस्थामा निदान गर्न सकिएमा उपचार सम्भव छ । तर, पाठेघरमा संक्रमण देखिँदा पनि बेवास्ता गरेमा यसले ठूलो रूप लिन्छ र ज्यान नै जान सक्छ ।
यो क्यान्सरको सुरुकै अवस्थामा उपचार नगरेमा शरीरका अन्य भागमा पनि फैलन्छ । सानै उमेरमा विवाह भएका महिला, कम उमेरमा यौनसम्पर्क राख्ने महिला, बढी सेक्स पार्टनर बनाउने, बढी सन्तान जन्माएका महिलामा यस्तो क्यान्सरको सम्भावना अधिक हुन्छ । कुपोषित, यौनसम्पर्कपछि संक्रमण भइरहने, परिवार नियोजनका साधन बढी प्रयोग गर्ने महिलामा पनि यस्तो क्यान्सरको जोखिम हुन्छ ।
३. पाचन प्रणालीको क्यान्सर
पाचन प्रणालीमा हुने क्यान्सर अन्यभन्दा जटिल हुन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, मद्यपान, सुपारीजन्य, रासायनिक पदार्थको सेवनले वाचन प्रणालीको क्यान्सर हुन्छ । त्यस्तै, मुखको नियमित सरसफाइ नगर्दा पनि पाचन प्रणालीमा असर पुग्छ । यसको कारण पनि यस्तो क्यान्सर लाग्न सक्छ । पाचन प्रणालीमा क्यान्सरका रोगीमध्ये ९० प्रतिशतमा मद्यपान र धूम्रपान सेवनका कारण भएको छ ।
४. मुखको क्यान्सर
सुर्तीजन्य पदार्थ र मद्यपानको सेवनले मुखको क्यान्सर हुने गर्छ । अनुसन्धानले पनि यो देखाएको छ कि मुखको क्यान्सर भएका ९० प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्थे । सुर्ती र मदिरासँगै चुरोटको प्रयोग गर्दा पनि मुख क्यान्सरको सम्भावना १५ प्रतिशतले बढेर जान्छ ।
जंकफुड, रफुड, केमिकल हालेको खानालगायतले मुखको क्यान्सर लाग्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले मुखमा आउने परिवर्तन, घाउ–खटिरा, दागलाई हेलचेक्र्याइँ गर्दा यसले भयंकर रूप लिन सक्छ । यसबारे सचेत हुन आवश्यक छ ।
५. आँखाको क्यान्सर
धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ कि आँखामा पनि क्यान्सर हुन्छ । यही सचेतनाको कमजोरीले पनि आँखा क्यान्सरको रोगी बढेको पाइएको छ । सुरुमै यसको क्यान्सरबारे थाहा भएमा निको पार्न सकिन्छ ।
तर, ढिलो भएमा आँखाका क्यान्सर शरीरभरि फैलन्छ, जुन निको पार्न निकै गाह्रो पर्छ । विशेषगरी बच्चाहरूमा आँखाको क्यान्सर देखिने गरेको छ । विश्व स्वाथ्य संगठनका अनुसार २० हजार नवजात शिशुमध्ये एकजनामा आँखाको क्यान्सर देखिएको छ ।
क्यान्सरबाट बच्न तारेको, भुटेका खाद्यपदार्थ बढी प्रयोग गर्नुहुँदैन । यस्ता खानाले शरीरको जुनसुकै अंगमा पनि क्यान्सर बनाउन सक्छ । केमिकलयुक्त खाद्यपदार्थ– तरकारी, फलफूल खानु हुँदैन । माछा, मासुको पनि कम प्रयोग गर्नु स्वस्थकर हुन्छ । बरु गोडागुडीजन्य खानेकुराको बढी प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
क्यान्सर शरीरको कोष या कोषिकाको समूहको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निम्तिने रोग हो । यदि यस्तो हानिकारक कोष या कोषिकालाई समयमै नहटाएमा पूरै शरीरमा फैलन्छ र अन्ततः मानिसको ज्यान नै लिन्छ । यो रोग मध्यपान, धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको अधिक प्रयोग र अव्यवस्थित खानापान तथा जीवनशैलीका कारण लाग्ने गर्छ ।
अत्यधिक चिल्लो पदार्थ, नुन, धुवाँमा सेकाएको मासु, ढुसी परेको खानेकुरा, बासी खानेकुराको प्रयोग पनि क्यान्सरका कारक हुन् । कतिपयलाई वंशाणुगत कारणले पनि यो रोग लाग्छ । अत्यधिक घाम, परमाणुको प्रभाव, नियमित उपचारमा प्रयोग हुने रेडियो विकिरणले पनि क्यान्सर बनाउन सक्छ ।
त्यसैले एक्सरे, सिटी स्क्यान, रेडियोथेरापी, मोमोग्राम आदिको अत्यधिक प्रयोग गर्नुहुँदैन । वातावरण, औद्योगिक प्रदूषण, मिसावटयुक्त खानाको सेवन, विभिन्न विषाक्त रसायन पदार्थको प्रभावले मानिसमा क्यान्सर देखिन सक्छ ।
Don't Miss it माइग्रेन भनेको के हो, कारण, लक्षण र उपचार
Up Next यी चिज फ्रिजमा राख्दा नकारात्मक असर